Ethiopia oo duqeysay caasimada Tigray madaama ay diiday baaqyada dhexdhexaadinta | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ethiopia oo duqeysay caasimada Tigray madaama ay diiday baaqyada dhexdhexaadinta
Boqolaal qof ayaa ladilay qaarna 25,000 ayaa u qaxay dalka Suudaan tan iyo markii uu bilaawday howlgalka militariga dowlada ee ka dhanka ah taliyayaasha Tigray ku dhowaad laba todobaad ka hor.
Qaxootiga Itoobiyaanka ah ee kasoo cararay dagaalada Tigreega si ay sahay ugu helaan xerada Um Rakuba ee kutaala bariga gobolka Gadarif ee wadanka Suudaan
Diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya ayaa duqeeyay magaalo madaxda gobolka Tigreega ee xasaradaha ka taagan tahay, ilo wareedyo dhowr ah ayaa sheegay, iyadoo dowladda federaalka ay iska caabisay cadaadiska caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu dhex dhexaadiyo colaadda iyada oo lala dagaalamayo xoogag daacada u ah xisbiga maamulka gobolka.
Ann Encontre, oo ah wakiilka hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee Itoobiya, ayaa sheegtay in asxaabteeda magaalada Mekelle, maalintii Isniinta ay soo tabinayaan inay arkeen “duqeyn cirka ah, oo aan ka fogeyn iyaga”.
“Ma ogin bartilmaameedka iyo cidda la bartilmaameedsaday,” ayay u sheegtay Al Jazeera iyada oo ka timid caasimadda Itoobiya, Addis Ababa. “Waxaan joojinay xiriirkii aan la sameynay asxaabteena marka aan helno internetka, laakiin wali waxaan ognahay in qof walba uu diley cabsi isla markaana dadka rayidka ah ay bilaabeen isla markiiba.
Ciidamada cirka ee Itoobiya ayaa bambooyin ku tuuray magaalada Mekelle iyo hareeraheeda, sida laga soo xigtay afar ilo diblomaasiyadeed iyo milatari oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. Ma jiro wax war ah oo ku saabsan qasaaraha iyo sidoo kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dowlada Ethiopia.
Debretsion Gebremichael, oo ah hogaamiyaha xisbiga Tigray People’s Liberation Front (TPLF), ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof oo rayid ah ladilay qaar kalena la dhaawacay. Wuxuu ku sheegay fariin qoraal ah oo uu u diray Reuters in intii Mekelle la duqeeyay, magaalada Alamata ee koonfurta Tigray ay la kulantay weerar diyaaradeed.
Gudi howleedka Ethiopia ayaa mar sii horeysay sheegay in ciidamada federaalka ay “xoreeyeen” Alamata, oo qiyaastii 120km (75 mayl) u jirta Mekelle. Ma jirin wax hadal ah oo degdeg ah oo ka soo baxay madaxda Tigreega oo ku saabsan Alamata.
Maadaama isgaarsiinta internetka iyo taleefoonku intabadan ay xiran yihiin isla markaana warbaahinta laga mamnuuco inay ka warbixiyaan gobolada waqooyi, suurtagal ma ahan in si madax banaan loo xaqiijiyo sheegashada ay sameeyeen dhinacyada oo dhan.
“Isku dhacu wali wuu firfircoon yahay,” ayuu yiri Encontre, isaga oo ku tilmaamay “xaalad aad u xun”.
Dadku si joogto ah ayey u socdaan.
Qiyaastii 25,000 oo qaxooti ah ayaa u qaxay dalka deriska la ah ee Suudaan boqolaal dad ah ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen tan iyo markii Raiisel wasaare Abiy Ahmed uu amar ku bixiyay in duulaano dhanka cirka ah iyo weerar dhulka ah lagu qaado 4tii Nofeembar ka dhanka ah taliyayaasha deegaanka ee Tigreega oo diidan maamulkiisa. Labada dhinacba waxaa lagu eedeeyay inay geysteen tacadiyo ka dhan ah dadka shacabka ah.
Abiy, oo 44 sano jir ah, ayaa ilaa hadda iska caabiyey cadaadiska lagu saarayo wadahadalada si loo soo afjaro qalalaasaha ku hanjabay inuu xasillooni darro ka abuuri doono gobolka ballaadhan ee Geeska Afrika.
“Waxaan leenahay‘ Waqti na sii ’. Maaha mid qaadanaysa ilaa aakhiro… waxay noqon doontaa hawlgal muddo kooban soconaya, ”ayuu yiri Redwan Hussein, oo ah afhayeenka kooxda la dagaalanka qalalaasaha Tigreega ee dowladda, oo wariyeyaasha u sheegay Isniintii.
“Weligeen kama codsanin Uganda ama dal kale inay dhexdhexaadiyaan,” ayuu Redwan ku daray, ka dib markii Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu la kulmay Demeke Mekonnen, wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo ra’iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya oo uu ka codsaday wadaxaajood.
Museveni, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka oo markii dambe la tirtiray wuxuu ku sheegay kulanka uu la qaatay Demeke, “Waa inay jiraan waan-waan iyo in la joojiyo iskahorimaadka, si aysan u horseedin khasaaro nafeed oo aan loo baahnayn iyo curyaaminta dhaqaalaha.”
Demeke intaas kadib wuxuu usii gudbay Kenya.
Saraakiisha Kenya iyo Jabuuti waxay ku boorriyeen xallin nabadeed iyo furitaanka marinnada bani’aadamnimada, halka Madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo uu aaday Itoobiya. Wadamada Yurub ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay miisaameen, iyadoo Norway qorsheyneyso inay u soo dirto ergey gaar ah.
Dhulka Tigray wuxuu doorbidaa difaacayaasha oo aad u hubaysan una qalabaysan; Matt Bryden, oo ah lataliyaha istiraatiijiyadda ee xarunta cilmi-baarista ee Sahan Research ayaa u sheegay Al Jazeera in ay muddo tobanaan sano ah ka soo dagaallamayeen buurahaas ka hor iyo inta ay sii socotaba, cabashooyin badan ayaa la soo ururin doonaa, waana sii adkaan doontaa in khilaafkan la xalliyo.
Mid kamid ah diblumaasiyiinta ayaa sheegay in ciidanka Ethiopia ay soo warinayaan inay dib ula wareegeen boqolkiiba 60 deegaanka Tigreega isla markaana ay qorsheynayaan duulaan dhinacyo badan leh oo lagu qaado magaalada Mekelle, ujeedkiisuna yahay in lagu gaaro sedex maalmood gudahood.
Ciidanka Difaaca Qaranka Itoobiya waxay leeyihiin ku dhowaad 140,000 oo shaqaale ah iyo khibrad badan oo ay ka helaan la dagaalanka dagaalyahanada Soomaalida, jabhadaha ka jira gobolada xuduuda iyo Eritrea. Laakiin saraakiil sarsare oo badan waxay ahaayeen Tigrayan hubkiisa ugu awooda badanna wuxuu kujiraa gobolka.
Kooxda TPLF lafteedu waxay leedahay taariikh cabsi leh, waxay horseed u ahayd kacdoonkii Addis Ababa ee xukunka ka tuuray kalidii taliyihii Markis 1991 iyo culayskii dagaalkii 1998-2000 ee Ereteriya oo ay ku dhinteen tobanaan kun.
Jabhadda dagaalka adag ee TPLF, oo xukunta gobolka ay ku nool yihiin shan milyan oo qof, ayaa sheegtay inay gantaallo ku garaacday Ereteriya dhammaadkii usbuuca. Hogaamiyaasha Tigray waxay ku eedeeyeen Eritrea inay u dirtay taangiyo iyo askar xadka ka soo horjeedda, hadalkaas oo ay beeniyeen Itoobiya iyo Eritrea.
Abiy iyo Madaxweynaha Ereteriya Isaias Afwerk ayaa isku raacay 2018 si loo joojiyo colaadda tobanaan sano jirtay, heshiiskaas oo keenay in ra’iisal wasaaraha Itoobiya uu ku guuleysto abaalmarinta Nobel Peace Prize sanadkii hore. Sikastaba, wali waxaa jira cadaawad qoto dheer oo udhaxeysa xukuumada Isaias iyo kooxda dagaalka adag ee TPLF oo kusaabsan khilaafkii xadka ee burburay ee 1998-2000.
Debretsion wuxuu ku boorriyay Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika inay cambaareeyaan ciidamada federaalka ee Itoobiya, isagoo ku eedeeyay inay adeegsadeen hub tiknoolajiyad sare leh oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarada ayuu sheegay inay burburiyeen biyo xireen iyo warshad sonkor ah.
“Abiy Ahmed wuxuu dagaalkan ku qaadayaa shacabka Tigreega wuxuuna mas’uul ka yahay ujjeedada loogu talagalay in lagu dhibaateeyo dadka,” ayuu yiri.
Dowladda ayaa beenisay inay bartilmaameedsatay biyo xireenka ama goobaha rayidka, laakiin kama aysan hadlin warshadda sokorta.
Hogaamiyaasha Tigray waxay ku eedeeyeen Abiy, oo kasoo jeeda qowmiyada ugu badan ee Oromada, inuu silciyay oo uu ka nadiifiyey dowlada iyo ciidamada amaanka labadii sano ee lasoo dhaafay. Wuxuu sheegay inay kaga soo horjeedeen iyagoo weeraray saldhig militari wuxuuna yiri howlgalka militariga waxaa looga dan leeyahay soo celinta kala dambeynta iyo “ilaalinta sharciga”.
Amnesty International waxay cambaareysay dilka daraasiin iyo suura gal boqolaal shaqaale rayid ah xasuuq ay labada dhinac midba midka kale ku eedeeyay.
Previous articleMaxaa ku soo kordhay Caawa dagaalada ka socda Dalka Etoobiya
Next articleDil ka dhacay magaalada Baladweyne looguna geystay Masuul
Somaliland oo Xabsi ku xukuntay Cabdimanaan Yuusuf oo ah milkiilaha TV-ga...
Wararka aan ka heleyno magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland waxay sheegayaan in maxkamadda gobolka Maroodi-jeex ay xukun xabsi iyo lacag isugu jira ku riday...